We She Me: မြတ်မြင့် ဖြစ်သွားတဲ့ မြင့်မြတ်နိုး
| FLAGS: Australia , Baby
War War - 2/2/08, 3:26 AM
Can do the birth certificate there for Tone Tone though she was born in SG? Nice...
Anonymous - 2/2/08, 2:26 PM
Di nay yar kya tot hmu-gyi than shwe ne`. tu pyan yaw.
Andy Myint - 2/2/08, 3:58 PM
ဟုတ်ပ စာဖတ်သူရေ။ ဗေဒင်ကတော့ ဗမာပီပီ ယုံလိုက်ပြန်ရော။ မှူးကြီး နဲ့တော့ မတူပါရစေနဲ့။
၀ါဝါရေ... Birth Certificate က စင်္ကာပူမှာ လုပ်တာပါ။ ကျွန်တော်ရေးတာ ရှုပ်သွားလားမသိ။